नेपालमा नै यामाहा उत्पादन गर्ने सम्भावना छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता नेपालमा नै यामाहा उत्पादन गर्ने सम्भावना छ
अन्तरवार्ता 1 views
नेपालमा नै यामाहा उत्पादन गर्ने सम्भावना छ
यामाहा मोटर कर्पोरेशन
यामाहा मोटर कर्पोरेशन, जापानका कार्यकारी अधिकृत मसाकी असानो नेपाली बजारमा बाइक र स्कुटरको लोकप्रियता देखेर हुरुक्क भएका छन् । नेपाल दुईपाङ्ग्रेका लागि राम्रो बजार भएको निष्कर्षमा पुगेका मसाकीले नेपालमा नै एसेम्बल प्लाण्ट राख्नका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था आइपरेको समेत बताएका छन् । नेपालको अटोमोबाइल्स बजारको स्थलगत अध्ययन गरी यामाहाको नेपालसम्बन्धी नयाँ रणनीति बनाउन काठमाडौं आइपुगेका मसाकी असानो यामाहा मोटर इण्डिया सेल्स प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा समेत कार्यरत छन् । १९८१ देखि यामाहा मोटर कर्पोरेशनमा संलग्न रहेका मसाकीले सन् २०१२ देखि यामाहा मोटर इण्डियाको सीईओको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । सन् २००७ देखि २०१२ सम्म भियतनाम यामाहाको अध्यक्ष रहेका मसाकीे इण्डोनेसिया, पोर्चुगाल, इटाली र दक्षिण अमेरिकामा पनि त्यहाँको यामाहा कर्पोरेशनको प्रमुख भई कार्य गरिसकेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा यामाहाको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेका मसाकीले नेपालमा यामाहाको बजारलाई विस्तार गरी अग्रस्थानमा राख्ने सोच बनाएका छन् । प्रस्तुत छ, अटोमोबाइल्स बजार विस्तारका लागि नेपाल आइपुगेका मसाकीसँग आर्थिक अभियानका लागि पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालको मोटरसाइकल बजारलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ? नेपालमा दुईपाङ्ग्रे साधनको उपस्थिति कस्तो रहेको छ ?
नेपालका युवा जमातको अभिन्न अङ्गको रूपमा दुईपाङ्गे्र साधनको उपस्थिति पाएको छु । विश्वका अन्य शहरमा भन्दा बढी काठमाडौंमा दुईपाङ्ग्रेप्रति मोह भएको पाएँ । यसर्थ नेपालमा दुईपाङ्गे्र सवारीसाधनको बजारको भविष्य अझ रहेको पाएको छु ।
यामाहाले नेपालका लागि अब के योजना ल्याउँदै छ ?
नेपाली बजारलाई दृष्टिगत गरी हामी सूक्ष्म तवरले अध्ययन गरिरहेका छौं । तत्कालका लागि यामाहा स्कुटरको बजारीकरणमा केन्द्रित हुने कि भन्ने योजना छ । यसैगरी प्रिमियम तथा प्रिमियम प्लस बाइकको बजार हिस्सा बढाउने योजना रहेको छ । काठमाडौंका शहर घुम्दा स्कुटरमा विशेष आकर्षण रहेको पाएको छु । यसैगरी नेपाली युवापुस्ताले प्रिमियम र प्रिमियम प्लस सेगमेण्टका बाइकलाई मन पराएको पाएँ ।
स्कुटरको बजारीकरणमा जोड दियौं भने बजार अझै फराकिलो बन्न सक्छ । स्कुटरमा मात्रै नभइ प्रिमियम र प्रिमियम प्लस सेगमेण्टका बाइकमा पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको पाएको छु । नेपालमा मोटरसाइकल र बाइकको बजार अझै पनि विस्तारकै क्रममा रहेकाले यहाँ यामाहाले विशेष प्रकारको रणनीति बनाएर मार्केटिङ गर्नेछ ।
नेपालमा नै दुईपाङ्ग्रेको उत्पादन गर्नेतर्फ कस्तो सोच रहेको छ ?
नेपालमा एसेम्बल प्लाण्ट राख्नेबारे पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं । भारतले सन् २०२० पछि युरो ५ मापदण्डका सवारीसाधनमात्र उत्पादन गर्ने भएको छ । यसर्थ नेपालका लागि फरक प्लाण्ट आवश्यक हुने कुरामा हामी सोचमग्न भएका छौं । नेपाल र भारतका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा सवारी उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले हामीले नेपाललाई प्लाण्ट राख्ने सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिएका छौं । तर, यसका लागि नेपाल सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका साथै यहाँको बजार हिस्साको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
धेरैजसो मुलुकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिन थालेको अवस्थामा यामाहाले विद्युतीय सवारी उत्पादनका लागि कस्तो योजना बनाएको छ ?
युरोपका विभिन्न मुलुकले समय निर्धारण गरेर विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ । भारतले पनि १० वर्षभित्रमा विद्युतीय सवारीसाधनमय देशको कल्पना गरिसकेको छ । यसर्थ यामाहाले पनि विद्युतीय सवारीका लागि अनुसन्धान थालिसकेको छ । अबको १० वर्षभित्र कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारीलाई परिचित गराउने गरी काम गरिरहेको छ ।
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०८:०८
९ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:४५
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:४१
थप परियोजना पहिचानको काम गर्दै छौं
३ बैशाख २०७५, सोमबार ०७:३४